स्थानीय तहमा ‘वान रोड सिस्टम’ लागू भएन : राजनराज पन्त – हाम्राे गोरखा » स्थानीय तहमा ‘वान रोड सिस्टम’ लागू भएन : राजनराज पन्त
१२ असार २०७८, शनिबार १३:११
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा गोरखा नगरपालिकाबाट निर्वाचित भएका थिए राजनराज पन्त । नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका उनले निर्वाचनमा नगरप्रमुखको पद जित्न सफल भएका थिए । प्रदेश ४ मा पर्ने गोरखा जिल्लाको एक मात्र ऐतिहासिक नगरी गोरखा नगरपालिकाको गठन वि.स. २०५३ साल माघ १५ गते साविक गोरखकाली, रानिश्वारा र तारानगर गाविसलाई समेटेर गरिएको हो । प्रस्तुत छ सोही नगरपालिकाकानगरप्रमुख राजनराज पन्तसँग गरिएको कुराकानी ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
निर्वाचित भएयता जनताले महसुस गर्ने किसिमका केके काम गर्नुभयो ?
त्यहाँको कृषि प्रवर्द्धन र विकासका लागि नगरपालिकाले केकस्ता योजना र बजेटको व्यवस्था गरेको छ ?
त्यसैगरी धेरै गर्भवती महिलाहरु नियमित चेकजाँचको लागि स्वास्थ्य संस्था नजाने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई हटाउनका लािग ४ पटक स्वास्थ्य संस्था जाने महिलाका लागि पोषिलो झोलाको व्यवस्था गरेर गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्था जान अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । नवजात शिशुका लागि पोषिलो खानेकुरा कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । साथै सुशासन नीति पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा पुग्यो, निम्छरो वर्गले पनि सहजै सेवा पाउन थाले भनिएको छ । जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएनन् भन्ने टिप्पणी र गुनासो सुनिन्छ नि ?
हामीले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा हामीले कमी ल्याएका छैनौँ । जनताले त्यस्ता सेवा सुविधा सहज ढङ्गले पाउनुभएको छ । तर जुन ढङ्गले जनताले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि पूर्वाधारको कमी र कर्मचारी संयन्त्रका कारणले पनि जनतालाई सेवा पाएको अनुभूति नभएको हो । सबै जनप्रतिनिधि एक न एक राजनीतिक फोरमबाट प्रवेश गर्नुभएकाले सबै कुरामा ज्ञाता हुनुहुन्न । विशेषज्ञको रूपमा कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्ता कर्मचारीको अभाव भएका कारणले गर्दा सिंहदरबार नै गाउँ आएको महसुस नगर्नु स्वाभाविक हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुग्यो भनिएको छ, यथार्थतामा झल्किएको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा वान रोड प्रणाली कृषि, पशुपालन, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका चिजहरु स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने भनेर संविधानमा सूचीकृत गर्यौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौँ । त्यसलाई बेवास्था गरेर अहिले प्रदेश सरकार मातहत थुप्रै कार्यालयहरु खुलेका छन् । कार्यक्रमहरु विभिन्न तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहकार्य गरेको छैन । केन्द्र सरकारका सङ्घीय कार्यालयहरुले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरी अगाडि बढ्ने गरेको छ । जुन प्रकारले बजेट विनियोजन भएर जनताको बीचमा पुगेको छ । त्यसको बाँडफाँट वान रोड सिस्टमबाट हुन नसक्दा जनताको आवश्यकताको सम्बोधन स्थानीय तहलाई जति जानकारी हुन्छ, सङ्घ र प्रदेशलाई हुँदैन । स्थानीय तहको सिफारिसबिना विकासका कार्यक्रमहरु जाँदा जनताले अनुभूति गर्ने काम नभएकै हो । त्यसैले त्यस्ता विकासका कार्यक्रम जुन समुदायलाई लक्षित गर्ने हो ती कुरा जनताले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । जनताको माझमा सिंह गएको छ । सिंहका कारण जनतालाई आतङ्कित बनाउने काम भएको छ । जनताले केही हुन्छ भनेर २ वर्षसम्म दुःख गरेका थिए । स्थानीय तहसँग केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहकार्यको कमीले नै जनतामा निरासा छाएको छ ।
राज्यले दिएको सेवा सुविधा नपाएका वृद्धवृद्धाका लागि व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएका छौँ । अनाथ, अपाङ्गका लागि पनि नगर प्रमुख बिमा कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडाका १०० जनाका दरले १४०० समावेश हुनेछन् ।
नगरबासी र गाउँबासी कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउँछन् ?
मुख्यतः बाटो राम्रो भएन, खानेपानीको सुविधा भएन, विद्युत्को समस्या, पुलहरुको व्यवस्थापन जस्ता समस्या लिएर आउँने गर्छन् ।साभारः रातोपाटी डटकम ।